शरीरमा भिटामीन डी को कमी भयो ? देखिन्छन् यस्ता लक्षणहरु ! | सुदुरपश्चिम खबर
शरीरमा भिटामीन डी को कमी भयो ? देखिन्छन् यस्ता लक्षणहरु !
मानव शरीरलाई भिटामिन डीले धेरै फाइदा गर्छ तर, कतिपयमा यो भिटामिन अपुगका कारण विभिन्न समस्य हुने गरेको छ । अध्ययनहरूले पनि विश्वका धेरै मानिस यो भिटामिनको अभावमै बाँचिरहेको देखाएको छ । शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा पर्याप्त नहुँदा धेरै प्रकारको रोगबाट पीडित हुनुपर्छ ।
तपाईं–हामीले दैनिक स्वस्थ्य खानेकुरा खाएर, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्दा, पर्याप्त मात्रामा निद्रा पुगे पनि भिटामिन डीको कमी छ भने धेरै खालका समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमी भए–नभएको रगतको परीक्षणमार्फत थाहा हुन्छ । त्योभन्दा अरू केही तरिका पनि छन् जसले रगतको परीक्षण नै नगरी पनि शरीरमा भिटामिन डीको कमी रहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
हेर्नुहोस् शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुदा देखिने यी पाचँ संकेत
१. दुखाइःशरीरमा रहेको हड्डीमा कहिलेकाहीँ दुखाइ हुनु असामान्य होइन । विभिन्न कारणले हड्डी दुख्न सक्छ । यो सबै उमेरका मानिसमा हुन सक्छ तर, अरू कारणले हुने यस्ता दुखाइ चाँडै हटेर जाने गर्छ । लामो समयसम्म रहने हड्डीको दुखाइ भने शरीरमा भिटामिन डीको कमीका कारणले भएको हुन सक्दछ । यदि यस्तो समस्या देखिएमा शरीरमा भिटामिन डीको अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
२.पसिना धेरै आउनुः गर्मीको समयमा हामी सबैलाई पसिना आउँछ । कुनै काम गर्दै गर्दा, खेल खेल्दा वा जिममा शारीरिक व्यायाम गर्दा पसिना आउनु सामान्य हो । यस्तो समय आउने पसिनामा चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर, यदि यत्तिकै बस्दा पनि वा सामान्य अवस्थामा पनि पसिना आउँछ भने त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमीका कारण पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ । यदि त्यस्तो समस्या भयो भने डाक्टरको सम्पर्कमा जान आवश्यक छ ।
३. डि–प्रेसनः यदि शरीरमा भिटामिन डीको धेरै कमी भएको छ भने मुडलाई समेत असर गर्न सक्छ । यस्तै, भिटामिन डीको कमीकै कारण डिप्रेसन हुन पनि सक्छ । यदि समयमै यसको उपचार नगरिए यसले अरू ठूलो समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसैले शरीरमा भिटामिन डीको अवस्थाबारे नियमित परीक्षण गरिरहनुपर्छ ।
४.अनपेक्षित कमजोरीः शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएको छ भने पनि अनपेक्षित रूपमा कमजोरी महसुस हुने गर्छ । शरीरको मसल्स फिट राख्न शरीरमा भिटामिन डी पर्याप्त हुन आवश्यक छ । यसले सामान्य चेटपटकबाट समेत बचाउँछ । अध्ययनहरूले यो देखाएको छ कि थप भिटामिन डी लिँदा भिटामिन डीकै कमीका कारण कमजोर भएको मसल्स ६ महिनामै फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कनेछ ।
५.कमजोर हड्डीःटामिन डीले मानव शरीरमा रहेको हड्डीलाई बलियो र स्वस्थ्य बनाइराख्ने काम गर्छ । यदि शरीरको कुनै पनि हड्डी भाँच्चियो भने, सम्झनुहोस् शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएको छ । शरीरमा भिटामिनट डीको कमी भएका कारण हड्डीमा यस्तो समस्या आउन सक्छ । वृद्धवृद्धाहरूमा यो समस्या अझै बढी हुन सक्छ । विशेष गरी बढी उमेरका मानिसले शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा आवश्यकअनुसार रहे–नरहेको निश्चित गर्न आवश्यक छ । नयाँ पुस्ता बाट सभार
कुन अवस्थामा आवश्यक हुन्छ दाँतमा तार ? जान्नुहोस् यस्ता छन् केही कारणहरु !!